Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ UK na -agbasa » Njem na UK dị oke ọnụ
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Ụgbọ ala mgbazinye • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • Rail njem • Iwughachi • Resorts • Ịrụ ọrụ • isiokwu Parks • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ UK na -agbasa • Akụkọ dị iche iche
Njem Nleta Obodo UK mere ọnụ ya n'ahịa
Ndị ezumike ụlọ UK na ndị na -enye ebe obibi abawanyela ọnụ ahịa nke ukwuu na 2021 n'agbanyeghị oke 'ọnụnọ'.
Mmụba ọnụ ahịa njem nlegharị anya nke UK nwere ike ịhụ ndị njem Britain ka ha na -enubata na ndị na -ahụ maka ọpụpụ na 2022
Ọnụ ahịa njem nlegharị anya nke ime obodo nwere ike igbochi ndị njem Britain na 2022.
36% nke ndị bi na UK 'nwere oke' ma ọ bụ 'dịtụ' na -eche maka ọnọdụ ego ha.
Ọtụtụ ndị na -enye ezumike UK kwesịrị ịtụgharị uche na atụmatụ ọnụahịa ha ugbu a.
ụfọdụ UK ndị na -enye ezumike ụlọ na ndị na -enye ebe obibi abawanyela ọnụ ahịa nke ukwuu na 2021 n'agbanyeghị oke ịrị elu arịrịọ 'ọnụnọ' na nke a nwere ike igbochi ndị njem nlegharị anya Britain na 2022.
Ịbawanye ọnụ ahịa ọnụ ahịa na -ebute ohere furu efu maka ọtụtụ ụlọ ọrụ njem nlegharị anya UK bụ ndị nweburu ohere dị ukwuu iji mụbaa asọmpi na ndị na -eme njem nlegharị anya. Kama nke ahụ, ọnụ ahịa karịrị akarị nwere ike ịpụ ha n'ahịa maka oge ọkọchị 2022 na karịa, mgbe ndị njem UK nwere ike ịlaghachi mba ọzọ.
Dabere na Q1 2021 UK nyocha ndị ahịa, 26% nke ndị zara ajụjụ bepụrụ ụfọdụ ngwaahịa na mmefu ego ha n'ihi ọrịa na -efe efe. Ọzọkwa, n'otu ọmụmụ ahụ, 36% nke ndị zara UK kwuru na ha 'nwere oke' ma ọ bụ 'dịtụ' gbasara ọnọdụ ego ha, na -akọwapụta mkpa ụlọ ọrụ njem maka ngwaahịa ọnụ ahịa asọmpi.
Ọ bụ ezie na ọ bụụrụ ụlọ ọrụ nlegharị anya njem nlegharị anya UK ịhụ njem nlegharị anya ụlọ ka ọ na-etolite n'oge ọkọchị a, ọ bụ ihe na-akụda mmụọ ịhụ ụlọ ọrụ na-elekwasị anya na ụgwọ ọrụ nwa oge kama ileba anya na nkwụsi ike ogologo oge nke ụlọ ọrụ njem nlegharị anya UK. Ụlọ ọrụ nwere nnukwu ohere ịmepụta ahụmịhe ezumike pụrụiche nke Britain ma gbakwunye uru na usoro a. Ọ bụ ihe nwute, ohere a nwere ike tufuo ọtụtụ ndị na-enye ọnụnọ n'ihi oke ịkpa oke maka ihe ndị njem chọrọ.
Ọtụtụ ndị na-eme njem nlegharị anya nwere ike iji ego atụnyere ihe niile Ememe ngwugwu Europe, nke na -agụnyekarị ụgbọ elu, ebe obibi, nnyefe, nri, na ihe ọ drinkụ drinkụ, a chọpụtala na ezumike ndị a na -adịkarị ọnụ ala maka otu ụbọchị ahụ kpọmkwem dịka ezumike ụlọ. Ọzọkwa, a na -eme ka iwu dokwuo anya, kagbuo na atumatu nkwụghachi emeela nke ọma, a na -agbakwa ọtụtụ ndị na -eri ọgwụ ọgwụ. N'ihi nke a, windo na -emechi ohere ndị njem ụlọ nwere ike inwe mmetụta na -adịgide adịgide, ọ dịkwa ọtụtụ ndị na -enye ezumike UK mkpa ịtụgharị atụmatụ atụmatụ ọnụahịa ha ugbu a.
Ebe akụkụ Europe mepere ndị njem nleta ọzọ, ndị njem na -atụnyere ọnụ ahịa karịa mgbe ọ bụla. N'ikpeazụ, azụmahịa ndị na-emebiga ihe ókè nwere ike ịwepụ onwe ha n'ahịa njem, nke na-ebibi onwe ya ma ghara ịdị irè na ogologo oge. Ndị ụlọ ọrụ ezumike ụlọ kwesịrị ịghọta ụdị asọmpi ndị ọrụ njem na -apụ apụ na asọmpi kpụ ọkụ n'ọnụ ha na -emepụta. Jet2holidays na TUI na -ebute ụzọ n'inye ezumike ngwugwu ka ha nwere nnukwu njikwa na eriri ọkọnọ ha, na -enyefe onye njem n'ụdị ego asọmpi.
N'ịtụgharị uche, ụzọ mkparị nke ndị na-enye ezumike ezumike UK nwere iji nweta ego na-achọ ka ọ dị nzuzu na ndị na-ahụ maka njem nlegharị anya nwere ike nweta ndị ahịa ochie ngwa ngwa karịa ka a tụrụ anya n'ihi ya.